Ofeeggannoofi Dammaqinsa: Uummata Oromoo Hundaaf Addatti immoo Uummata Oromoo Godina Booranaa, Gujii, – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOfeeggannoofi Dammaqinsa: Uummata Oromoo Hundaaf Addatti immoo Uummata Oromoo Godina Booranaa, Gujii,
Ofeeggannoofi Dammaqinsa: Uummata Oromoo Hundaaf Addatti immoo Uummata Oromoo Godina Booranaa, Gujii, Harargee, Godina Walloofi Godina Baalee hundaaf:
Lolli Waraana Liyuhayilii Somaalee Abdi Illeen hoogganamuufi waraana wayyaanee ADWUI’n deeggaraman uummata keenya Godinoota caqafaman kana irratti erga banamee itti fufinsaan gaggeeffamaa jira. Lolli uummaata keenyarratti gaggeeffama jiru kun lola ripxee lolaan tokko bu’aalee xixxiqqoof gaggeessu miti. Lolli kun itti yaadamee waraana qindaa’aafi meeshaalee waraanaa ammayyaan kan deeggarame lola kallattii (#Offensive_War)tu uummata keenyarraatti itti fufinsaan gaggeeffama jira. Lolli kun lola mootummaa biyya bulchuun uummata sivilii irratti gaggeeffama jiru ta’uu hunduu hubachuu qaba!!
1ffaa Uummaatni Oromoo Godinaalee caqafaman keessa jiraatuu yeroo kam iyyuu caalaatti ofeeggannoofi dammaqinsa guddaafi tarkaanfii of ittisuuf qophii walirraa hin citnee gochuu qaba!!
2ffaa Hidhattootni Ilmaan Oromoo (Poolisootni Oromiyaa, Milishoonni, Kora bittinneessaan Oromiyaa haala fedhee kamiin illee hidhannoo isin harka jiruu akka hin hiikkatne dhaamsa Oromummaa gadi jabeessuun dabarsina!!
uummaatni Oromoo Godinaalee Oromiyaa cufa keessatti argamtan haala kana hubannoo keessa galchuun uummata keenya Godinaalee Baha Oromiyaa, Kibbaafi Kibbaa Bahaa Oromiyaafi Godina Wallootti argamaniif Sagalee akka taanuufi tumsa barbachisuun uummata keenyaaf akka dirmannuuf waamicha Oromummaa dabarsina!!
Sabboontootni Diasporaan Oromoofi Abbootiin Qabeenyaa Oromoo qabeenyaa keessaniin Waraana Bilisummaa Oromoo WBO hidhachiisuufi humneessuu irratti xiyyeeffannoofi dammaqinsa guddaa kennuun dirqama Oromummaa akka bahattan waamicha Oromummaa itti fufinsaan dhiyeessina!!
Ilmaan Oromoo caasaa mootummaa ADWUI keessatti hiriiruun sadarkaa aangoo garaagaraa irratti argamtaan ofii aangoo waan argattaniif uummaatni Oromoo aangoofi kabajamuu mirga waan argate fakkeessuun uummata qe’ee isaarratti dhiigaa, lafee cabaafi qe’eef qabenyaarra buqqaa’aa jirutti olola siyaasaa haala qabatamaa jiruun wal hin fakkaaneen uummata burjaajessuuf yaaluufi Qabsoo Bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf bittaa umrii garboomsaaf dheeressuuf yaaluu irraa akka of dhaabdan ni akeekkachifna. Hundarra caalaa karaa ittin Qabsoon uummata keenyaa galii isaa gahuufi mirga bilisummaa uummata Oromoofi walabummaa Oromiyaa itti kabajamurratti waan dandeessaniin gumaacha Oromummaa keessani yoo baatan uummata keessan rakkoo keessaa baasuuf dhama’uu qofa haalli yeroo kan gaafatu. Kana gochuun hafee isiniif ta’eera callisaa, obsaa kan jettan yoo ta’ee diinni uummatichaa tokkoffaan isin ta’uufi uummataan nyaatamuu akka dandeessan hin dagatiina!!
Sochiin Warraaqsii FXG, Gaaffiin Mirga abbaa biyyummaa, mormiin Saamicha Albuudawwaan Oromiyaa, Saamichi Lafaa, dhimmi Midroc samichi Warqii laga Dambii Gujiitti gaggeeffamaa jiruufi yakka sanyii balleessuu ilmaan Oromoo irratti keemikaalli Midroc keessa bahuun rawwatama jiru mormuun warraaqsii finiinaa jiru hanga gaaffiin uummata Oromoo guutummaatti deebii gahaa argatutti haala yeroo irratti hundaa’uun daran jabaatee itti fufuu qaba!!
Sochiin Qabsoodhaan hidhamtoota Oromoo manneen hidhaa biyyatti garaagaraa keessatti argaman hundaa hidhaa irraa hiiksifachuu tokkummaadhaan guutummaa Oromiyaa Keessatti daran jabaatee itti fufu qaba!!
Ibsaa Nagaasaa tiin.